Daawo muuqaalka: Maxkamada Gobolka Banaadir oo Maanta Riday Xukuno kala Gadisan |
Daawo muuqaalka: Maxkamada Gobolka Banaadir oo Maanta Riday Xukuno kala Gadisan
Maxkamada gobolka Banaadir ayaa maanta xukuno xabsi ah ku riday ruux oo lagu helay danbiyo kala duwan waxaana ka mid ahaa danbiyada dadkani lagu helay Budhcadnimo,Caasiwaalidiinimo iyo Isticmaalka Mukhaadaraadka waxaana lagu kala xukumay xukuno u dhexeeya 3 sano ilaa 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax lacageed.
Axmed Aadan Faarax oo ah garsooraha maxkamada gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay xukunka maxkamada ayaa sheegay oin maxkamada gobolka ay maanta u rariisatay dhegeysiga dacwad loo haystay 18 eedeysane.
Garsooraha ayaa sheegay in 15 kamid ah dadkii lasoo eedeeyey lagu helay danbiyadii markii hore lagu soo oogay oo ay ka mid ahaayeen Burcadnimo,Xatooyo,Caasiwaalidiinimo iyo danbiyo kale oo badan wuxuuna sheegay in kamid ah eedeysanayaasha lagu waayey eedihii loo haystay sidaas darteedne ay maxkamadu fasaxdat gabi ahaanba.
Garsoorka maxkamada ayaa dhanka kale tilmaamay in maxkamadu ay dib u dhigtay go’aan ka gaarsita xukunka mid ka mid ahaa eedeysanayaasha oo uu sheegay in loo baahday markhaatiyaal dheeraad ah si loo xaqiijiyo inuu galay danbiga lagu soo oogay iyo inkale.
Maxkamada gobolka Bnaadir ayaa maalmahan danbe ku mashquulsan xukun ku ridida dadka lagu helo danbiyada ay galaan kuwaas oo dhibaato ku hayn jiray bulshada sida dhaca,kufsiga iyo dilk intaba.
Halkaan hoose ka daawo asi muuqaalka sida ay maxkamada xukunka u riday .